सिंहदरबारमा मात्र होइन, गीतमा पनि निथ्रुक्कै भिजेका दिनेश थपलिया
दररर दररर दर्क्यो पानी दरर
भिजेँ म त निथ्रुक्कै मुटु काम्यो थरर
ओत लाग्ने ठाउँ छैन, लौन कता जाऊँ !
कुरा २०६९ साल जेठको हो । सहसचिव दिनेशकुमार थपलिया सिंहदरबारबाट घरका लागि निस्कन्छन् । साँझ ६ बजेको हुँदो हो, बानेश्वर पुग्दा-नपुग्दै आकाशबाट मकैका दानाजत्रो पानीका थोपा बाक्लै बर्सिन्छन्, सडकमा हिँडिरहेका मानिसको नाङ्गो टाउको दुखाउने गरी । बेगसँग हावा चल्छ, सासै रोक्ला जसरी । सडकमा गाडीहरू लस्करै रोकिन्छन्, हावापानी रोकिने प्रतीक्षामा । तितरबितर मानिस ओत खोज्दै दौडिन्छन् ।
यही भीडबाट २२/२३ वर्षकी एक युवतीले आश्रय खोज्दै ती सहसचिव चढेको गाडीमा बाहिरबाट ढकढकाउँछिन् । ओतका लागि अनुनयविनय गरेको प्रष्टै बुझिन्छ । सहसचिवले ती युवतीलाई पानी नरोकिँदासम्म गाडीभित्र अगाडि बस्न दिन चालकलाई भन्छन् । तर, चालकले ‘सुरक्षा चुनौती’ देखाउँदै र चालकको अनुशासन भन्दै ढोका खोल्न मान्दैनन् । भन्छन्, ‘नखोलौँ होला सर, सडकमा थुप्रै मानिस यसैगरी ओत खोज्दै दौडिरहेका छन् हामीले दया देखाएर के हुन्छ र ? बरु अलि अगाडि गएर बसौँ ।’ तिनकुने, बागमती पुलको मुखैमा गाडी रोकिन्छ ।
सहसचिव थपलियाले ती युवतीलाई अनिमेष नियाल्छन्, जो सकसिलो स्थितिमा छिन् । त्यो हेर्दै गर्दा उनको दिमागमा शब्दहरू नाच्न थाल्छन्, ती उनिदै जान्छन् पङ्क्तिका रूपमा । अन्ततः ती शब्दले गीतको आकार पाउँछन् । माथि उल्लेख गरिएको दुई लाइन सोही गीतको अन्तरा हो ।
गायिका स्मिता दाहाल र गायक राजनराज शिवाकोटीले गाएको उक्त गीत अहिले युट्युबमा २ करोड ४२ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । पछिल्लो समय गायनक्षेत्रमा चर्चित गायिका स्मिता दाहाल पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी नातिनी हुन् ।
यति मात्र होइन, उक्त गीतको सफलताले अर्को एउटा गीत जन्माएको छ, मायालु तिमी भाग-२ । कोरोना कहरबीच लकडाउनको असहज अवस्थामा तयार गरी गत जुलाइमा सार्वजनिक भएको यो गीतले करिब १ करोडकाे हाराहारीमा भ्यूज पाएको छ ।
एउटा परिस्थितिलाई गीतमा बाँधिदिने उनै थपलिया हुन्, जो ३५ वर्षको सरकारी सेवापछि हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन् । सुन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ, कुनै बेलाका कडा प्रशासक थपलिया एक सिद्धहस्त गीतकार पनि हुन् । जो गीतमार्फत राष्ट्रभावदेखि प्रेमानुभूतिसम्म प्रकट गर्छन् ।
उनले १ सय ५० भन्दा बढी जनचेतनामूलक गीत, माया प्रेम बोक्ने व्यावसायिक प्रकृतिका १ सय ८० भन्दा बढी गीत, ३० भन्दा बढी देशभक्तिपूर्ण गीत र केही भजनसमेत लेखेका छन् । जागरण गीतका सबैजसो म्युजिक भिडियो बनेका छन् भने मायाप्रेम, विरह र वेदना बोक्ने ३० भन्दा बढी म्युजिक भिडियो र तीनवटा गीति एल्बम सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न समयमा लेखिएका सयभन्दा बढी गीतहरू संगीत र गायनको प्रतीक्षामा डायरीमा रहेको थपलिया बताउँछन् । उनको खास शिल्पदक्षता भनेको कुनै घटना, परिवेश वा परिस्थितिलाई हेरेर गीत कोर्नु हो । ‘मायालु तिमी कता छौ,’ मात्र होइन, कुनै घटनापछि उनले लेखेका गीत थुप्रै छन् ।
२०६६ साल जेठमा मन्त्रायलको कार्यक्रम थियो धुलिखेलमा । संविधान निर्माणको रस्साकस्सी चलिरहेको बेला राजनीतिका कुराकानी धेरै हुन्थे । कार्यक्रमको पहिलो सत्रपछि सहभागीहरू खाना खान प्लेट समाएर लाइनमा लागे । त्यसै बेला एक जना सहभागीले आफ्नो प्लेटमा सलादका केही टुक्रा राख्दै भने, 'हाम्रो देश यो सलादजस्तै हो, धेरै कुरा मिलाएर राखिएको हो । यसलाई खलबल्याउने दुस्साहस कतैबाट पनि हुनु हुँदैन ।' सुुुन्नासाथ दिनेश थपलियाको दिमागमा एउटा झन्कार पैदा भयो । खाना खाँदा खाँदै उनले लेखे-
मेरो देश इन्द्रेणी हो, रंगहरूको मेल
नखेल भो इन्द्रणी रंग, छुट्याउने खेल ।
वसन्त सापकोटाको संगीतमा स्वरुपराज आचार्यले स्वर दिएको यो राष्ट्रिय गीतलाई सीताराम कट्टेल धुर्मुसको मुख्य अभिनयमा म्युजिक भिडियो तयार गरिएको छ । धुर्मुसले यस गीतलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अभियानमा ब्यानर गीत बनाएका थिए । धुर्मुस-सुन्तलीकै च्यानलबाट यो गीत युट्युबमा हेर्न सकिन्छ ।
२०७१ साल भदौको कुरा हो, उनी विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएर क्षेत्रीय प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हाल्न पोखरा जानुपर्ने भयो । त्यसबेला ९१ वर्षीय बुबा र आमा उनीसँगै बस्थे । छोराहरू कलेज पढ्ने, श्रीमती जागिरे र आफू बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले बुबाआमालाई रेखदेख र सहजताका लागि दाजुकोमा लैजाने सल्लाह भयो । ‘बुबा अलिअलि बिरामीजस्तो, सधैँ सुतिरहने, धेरै कुराहरू बिर्सने अल्जाइमर भएजस्तो हुन्थ्यो । घरबाट निस्कँदा बुबाले ज्यादै चित्त दुखाउनुभयो । म अवाक भएँ । त्यसपछि भेट्न जाँदा, कुराकानी गर्दा बुबाले कहिल्यै होसका कुरा गर्नु भएन । यो घटनाले मेरो हृदय धेरै पल्ट रोयो’, थपलियाले विगत सम्झिए । यही प्रसंगलाई उनले बुबाप्रति समर्पित भएर शब्द संयोजन गरी बिर्सने प्रयास गरे ।
संसारका सृष्टिकर्ता, तिमी जीवनदाता
तिमी मेरो विधाता हौ, तिमी नै हो ज्ञाता
मलाई बाटो देखाउने, कर्तव्य नि सिकाउने
बाबा मेरो संरक्षक, बाबा परम पिता ।
‘यो गीत राम्रो संगीतसहित रेकर्ड गरेर सुनाउने धोको पूरा नहुँदै मैले बुबालाई सधैँका लागि गुमाउनुपर्‍यो’, थपलिया भावुक हुँदै सुनाउँछन् ।
जागिरका क्रममा प्रायः उनी बाहिरै रहे । २०३६ सालमा एसएलसी पास गरेर काठमाडौं पढ्न आएपछि बुबाआमासँग उनको विरलै भेटघाट हुन्थ्यो । ‘२०६२ सालसम्म बुबाआमा पहाड घर खाँदबारीमा नै रहनुभयो, त्यसपछि २०७० साल सम्म विराटनगर । पहाडमा हुँदा टेलिफोनको सहजता थिएन । चिट्ठी लेख्ने बानी छुट्दै गएको थियो’, थपलिया विगत सम्झछन्, ‘बुबाआमा विराटनगर आएपछि मातातीर्थ औँसीको दिन आमाले मेरो फोन कुर्नुभएछ । म कामको सिलसिलामा फिल्डमा थिएँ, बेलुका श्रीमतीसँग कुरा गर्दा झल्यास्स भएँ र आमालाई फोन गरेँ । यो घटनाले दुःखी मात्र बनाएन, एउटा गीत पनि जन्मायो ।’
आमा मेरी जननी, बाबा जन्मदाता
आमा मेरो परानी, बाबा मेरो सिरानी
मैले पुज्ने भगवान् हुन, मेरा माता पिता ।
यो गीत थपलियाले तत्कालै आफूसँगै रहेका पुरुषोत्तम नेपाललाई सुनाए । अहिले पनि यो गीत संगीत र गायनको प्रतीक्षामा छ ।
कानुन, व्यवस्थापन र शिक्षामा स्नातक तथा जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर थपलिया गीतकार मात्र होइनन्, कवि पनि हुन् । उनले दर्जनौँ कविता लेखेका छन् । उनका कतिपय कविता विभिन्न अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् भने कतिपय प्रकाशोन्मुख छन् । उनको पूरा नाम दिनेशकुमार थपलिया भए पनि साहित्य तथा संगीतको क्षेत्रमा उनी दिनेश थपलिया मात्र लेख्छन् ।
माया गरौँला, हो...माया गरौँला ।
‘यो गीत तपाईंले नै लेख्नुभएको हो ?’
निर्वाचन आयोगको कार्यकक्षमा यूएनडीपीसँगको जूम मिटिङपछि ल्यापटप फोल्ड गर्दै थपलियाले भने, ‘गीत मैले नै लेखेको हुँ । यसमा केही स्पष्टचाहिँ गर्नै पर्ला । खासमा यो गीत यसरी लेखिएको थियो:
केटाः फुर्सद भए मै आउँला, नभए तिम्लाई बोलाउँला
केटीः बोलायौ भने मै आउँला, नभए तिम्लाई पर्खौंला ।
उनले हाँस्दै थपे, ‘अहिलेको ट्रेनअनुसार मिलाउन र गायन सहजताका लागि भनेर निर्माता तथा निर्देशक सरोज ओलीले केही शब्द हेरफेर गर्न भने । मैले हुन्न भनेर जिद्दि गरिनँ ।’
अहिले टिकटकतिर भाइरल भएकामध्ये केही गीत थपलियाका हुन् । जस्तो कि, 'घरमा कोही नहुँदा', ‘माछीले खाने खोलीको लेउ’, ‘कमेरोले पोतेको दुई तलाको घर’, ‘पानी कुवाको’, ‘पहिलो पल्ट भेट हुँदा’, ‘सोल्टिनीको के छ खबर’, ‘अर्को जुनी खै कुन्नि कसलाई थाहा छ र खै’, ‘तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु भन्न मन लाग्यो’, ‘मलाई आमाले दिएको चौबन्दी चोली’, ‘तिम्रो आँखामा आँखा जुधाई’, ‘छेकेर माया छेकिन्न’, ‘जताजता पिरतीको बाटो’, ‘म राजकुमार तिमी राजकुमारी’ लगायत थुप्रै ।
धुर्मुस-सुन्तली विवाहको १०औँ वैवाहिक वार्षिकोत्सवको अवसरमा तयार गरिएको ‘उनी र म’ भन्ने म्युजिक एल्बमको ‘म जुन दिनदेखि तिम्रो राजा बनेँ, तिमी बन्याै रानी’ गीत थपलियाले नै लेखिदिएका हुन् । राष्ट्रिय भावका गीतहरू समावेश ‘सजग’ र आधुनिक गीतहरूको संगालो ‘सारांश’ र ‘सारांश’-१’ उनका गीति एल्बम हुन् । आफ्ना छोरारू सजग र सारांशको नाममा उनले एल्बमको नाम राखेका रहेछन् ।
थपलियाले राजपत्र अनंकित चौथो सबओभरसियर पदबाट सेवा प्रारम्भ गरी विशिष्ट श्रेणीको सचिवसम्म करिब ३५ वर्ष सरकारी सेवामा बिताए । हाल उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन् । २०४७ सालमा निजामती सेवाको शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेका उनले त्यसअघि २०४० सालदेखि सबओभरसियर र ओभरसियर पदमा संखुवासभा, मनाङ र रसुवा जिल्लामा काम गरेका थिए । उनले आफ्नो निजामती सेवाको झण्डै दुईतिहाई अवधि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर काम गरे । उनले काठमाडौं र विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तथा इलाम र चितवन जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा उनी जाजरकोटको सीडीओ थिए । उनले श्रम मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि काम गरे । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदोन्नति भएपछि उनले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा सचिव भई काम गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुअघि उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त भएका हुन् ।
२०५९ सालमा प्रकाशित ‘नेपालमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासन : उपलब्धि र चुनौती’ उनको पहिलो कृति हो । यसअघि थपलियाले लोकसेवा आयोग र अन्य सार्वजनिक सेवाका परीक्षार्थीलाई लक्षित गरी २०४५ सालदेखि प्रकाशित बौद्धिक संसार मासिक पत्रिकासँग आवद्ध भएर काम गरे । त्यसबेला बौद्धिक संसार प्रकाशनले प्रकाशित गरेका खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मका विभिन्न सेवा समूहका दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखनमा थपलियाको नाम पढ्न सकिन्छ । विभिन्न पत्रपत्रिका, मुखपत्र, स्मारिका, आदिमा उनका विकेन्द्रीकरण, योजना प्रशासन, विकास र नागरिक सशक्तीकरणसम्बन्धी दर्जनौँ लेखरचना प्रकाशित छन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने विभिन्न तालिम, गोष्ठी/सेमिनारमा अब्बल दर्जाका कार्यपत्र प्रस्तोताको पहिचान बनाएका थपलिया लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा पढाउने लोकप्रिय स्रोत व्यक्ति मध्येमा गनिन्छन् । अध्ययन, लेखन कला, साहित्य एवं गीत संगीतमा विशेष रुचि राख्ने थपलियाले लेखेका आधुनिक एवं जागरण साथै देशभक्तिपूर्ण गीतका थुप्रै म्युजिक भिडियो लोकप्रिय छन् ।
पहिलो गीत तथा कविता
२०३८ सालमा प्रतिविम्ब साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित ‘तिमी नभए...’ गीत र ‘विदेशिएका प्रति...’ तथा ‘भावना’ कविता उनका सबैभन्दा पहिले प्रकाशित गीत र कविता हुन् । हिमालय माध्यमिक विद्यालय खाँदबारीमा अध्ययन गर्दा थपिलयाका फुटकर रचना हिमाल भित्ते पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएका थिए । २०४४ सालमा उनले लेखेको मध्ये ‘ओभरसियर’ शीर्षकको कविता पहिलो पटक कर्मचारी मिलन केन्द्रको मुखपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । रसुवा, पर्वत, जाजरकोट, इलाम र चितवनमा कार्यरत रहँदा कर्मचारी मिलन केन्द्रकै मुखपत्रमा उनले लेखेका कविता, गीत र कथा छापिएका थिए । पछिल्लो समयमा नेपाल म्यागेजिन, गरिमा, मधुपर्क, समष्ठि, गोरखापत्र आदिमा उनका रचना प्रकाशित भइरहेका छन् ।
दिनेश थपलिया र संगीत
संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका- ८, रातमाटे पाठकगाउँमा जन्मिएका थपलियाका पिता स्व. लक्ष्मीप्रसाद थपलिया भजन लेख्थे । ठुलाबा वेदान्ती पण्डित अच्युतानन्द थपलियाले त उतिबेलै हस्तलिखत भजनसंग्रह तयार गरेका थिए । उक्त संग्रहका केही भजन डा. मातृका तिम्सिनाद्वारा सम्पादित ‘पखेराका फूलहरू’ पुस्तकमा छापिएका छन् । आमा डम्बरकुमारी भाकामा श्लोक भन्न र संगिनी गाउन माहिर । यही पारिवारिक पृष्ठभूमिको प्रभावले हुन सक्छ, दिनेश थपलिया सानैदेखि संगीत र कविता भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे ।
त्यसैले स्कुलमा हरेक शुक्रबार हुने अतिरिक्त क्रियाकलाप अनि कहिलेकाहीँ हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन छुटाउँदैनथे । ‘खेलमा म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँथे । अभिनय र गीत/कविता लेखनमा भने पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पुरस्कार उम्किन दिँदैनथे,' उनी स्मरण गर्छन् । उनी सानैदेखि गीत लेख्थे । तर, अहिले थपलियासँग त्यसबेला लेखिएका गीत छैनन् ।
‘तपाईं प्रशासक । दैनिक काम, बैठक, सिफारिसमा व्यस्त हुनुपर्थ्यो होला । आज पनि तपाईं निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । गीत कति बेला लेख्नुहुन्छ ?’
थपलिया मुस्कानसाथ भन्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको रुचि रहेछ । अनि कामकै क्रममा पनि गीत लेखिन्छ । मिटिङकै बीच पनि राम्रा शब्दहरू जन्मन्छन् । कार्यालयबाट घर जाने क्रममा बीचमा देखेका घटना/परिघटनामाथि गीत फुराइन्छ ।' ‘मायालु तिमी कता छौ’ गीतको उदाहरणउनले पुनः पेस गरे ।
‘महत्त्वपूर्ण सरकारी पद, प्रतिष्ठा छँदै थियो । गीत लेखनतिर चाहिँ किन रुचि जाग्यो त ?’
‘तपाईं अहिले मलाई पूर्वसचिव भन्नुहुन्छ । निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएपछि पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्नुहुन्छ । तर, कसैलाई पूर्वगीतकार, पूर्वकवि भन्नुहुन्छ त ?’, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै उत्तर दिए, ‘आफूलाई सधैँ वर्तमानमा राख्ने क्षमता हुनेहरूले त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । अर्को कुरा १० लाइनको गीतबाट तपाईंले एउटा पूरै फिल्म बोल्न सक्नुहुन्छ, कथा भन्न सक्नु हुन्छ, एउटा जीवन देख्न र बोल्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्र बोल्न सक्नुहुन्छ ।’
दिनेश थपलियाको बुझाइमा कुनै पनि सिर्जना मानव जीवनका भोगाइका उपज हुन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै मानिसले जीवन के हो भनेर सोध्यो भने म जवाफ दिन्छु- जीवन एउटा बाँच्ने पद्धति हो, भोगाइ, अनुभव, अनुभूति हो । यी कुरालाई खोज्दै गइयो भने जीवनभित्र आँसु, हाँसो, मायाप्रेम, बिछोड, मित्रता, हार, जीत, संघर्ष सबथोक छ । जीवनभित्र राष्ट्रियता, स्वाधीनता पनि हुन्छ । यी सबै कुरालाई लेखकले लेखका रूपमा लेख्छ । कुनै साहित्यकारले साहित्यिक विधामा लेख्छ । गीतकारले गीतका रूपमा लेख्छ । व्यक्तिले जे देख्छ, जे भोग्छ, जे अनुभव गर्छ, जे सुन्छ, तिनलाई कलमबद्ध गर्दा सिर्जना हुने वा जन्मिने सन्तानै सिर्जना हो । सम्भवत: मैले पनि यसरी नै गीत जन्माइरहेको छु कि ?’
गीत सुन्नेभन्दा हेर्ने प्रवृत्ति ज्यादा भयो
सांगीतिकक्षेत्रमा भित्रिएको आधुनिकतालाई उनी अस्वाभाविक ठान्दैनन् । भन्छन्, ‘आधुनिकतालाई म विकृति ठान्दिनँ । विकास क्रमसँगै यो आवश्यक छ ।’ तर, आधुनिकीकरणको नाममा पश्चिमीकरणको दुष्प्रभाव र विकासको नाममा संस्कृतिमाथिको क्षयीकरणप्रति भने संवेदनशील हुनैपर्छ भन्ने उनको बुझाइ छ । उनका लागि चिन्ताको विषयचाहिँ सर्जकप्रतिको आममानिसको असमान हेराइ, बुझाइ हो । उनी थप्छन्, ‘गीतको शब्द शरीरको अस्थिपञ्जर भनेजस्तै हो । संगीत ती अस्थिपञ्जरलाई शरीरका रूपमा विकास गर्ने मासु हो । गाइएपछि त्यो शरीर बोल्न थाल्छ । त्यसपछि अभिनय गर्न थाल्छ, जुन भिडियोमा मोडलहरू नाच्छन् ।’
उनको मतलब गीत सुन्नेभन्दा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताको विषय हो । ‘कुनै एउटा इभेन्टमा पुग्दा दुई युवती त्यहाँ खासखुस गरिरहेका थिए- ओइ पल र स्वस्तिमाको अर्को गीत आएछ नि ! मैले उनीहरूलाई नजिकबाट सुने उनीहरू भन्दै थिए- पल र स्वस्तिमाको त्यै के त !, मायालु तिमी-२ ! उनीहरूले गीत लेख्ने मलाई चिनेनन्, मेरो चर्चा गरेनन्, संगीतकारलाई सम्झने दरकार परेन, गायकगायिकाको चासो र चर्चा भएन । यो मेरो मात्र चिन्ता होइन, समस्त गीतकार तथा गीतसंगीतसँग जोडिएका सबै सर्जकको हो’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘एउटा गीतको पूर्णता गीतकार, संगीतकार, गायकगायिका, एरेञ्जर, अभिनयकर्ता, प्रचारप्रसारका माध्यम, प्रस्तुतीकरण गरिदिने रेडियो टेलिभिजन र हेरिदिने सुनिदिने आमस्रोता र दर्शकको समष्टिगत रूप हाेइन र ? त्यसो त, सर्जकका समस्या कति छन् कति !’
तपाईं सञ्चार सचिव हुँदा सर्जकका समस्या समाधान गर्न किन पहल गर्नु भएन त ?
रोयल्टी समाजका माग र एजेण्डाहरूको सम्बोधन, रेडियो नेपाल विकास समितिबाट सर्जकहरूको रोयल्टीका निम्ति पहिलो पटक बजेट विनियोजन, रोयल्टी वितरणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा र सर्जकहरूको हितका निम्ति संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन कार्ययोजना आदिबाट काम त्यतिबेलै थालिएको उनी बताउँछन् । सञ्चारमाध्यमहरूमा सबै सर्जकलाई समान हैसियत नदिएको महसुस गरी ‘कुनै सञ्चारमाध्यमबाट गीत प्रसारण गर्दा गीतकार, संगीतकार र गायकगायिका सबैको पहिचान खुलाउनुपर्छ भन्ने अभियान उनीसमेतको प्रयासमा सुरु भएको हो । 'त्यसबाहेक कतिपय नीतिगत सुधारका कुरामा पनि मेरो सक्दो प्रयास रह्यो र अहिले पनि त्यो कर्तव्यबाट विमुख छैन’, उनले भने ।
एक दिन उनी अफिसबाट घर जाँदै गरेका हुन्छन् । बाटोमा देख्छन्, दुई घरको छतबाट एक युवक र युवती इशारामा कुरा गरिरहेका छन् । थपलियाले रोकिएर आँखा लडाइरहेका ती युवक र युवतीतिर हेर्छन् । उनीहरू सतर्क हुन्छन् र एकअर्कालाई नदेखेजस्तो गरी आफ्नै सुरमा अर्कोतिर फर्किन्छन् । थपलियालाई लाग्छ, ‘केटीले केही भनी, केटाले पनि केही भन्यो । यिनको मौनतामा एउटा राम्रो गीत बन्छ ।’ त्यति भएपछि एउटा गीतकारलाई धेरै के चाहियो । लेखिहाले:
केटीले भन्छिन्- प्याट्ट जिब्रो पट्कायौ, हेरेँ मैले पुलुक्क
डराएको झैँ गरी, हिँड्यौ तिमी लुसुक्क
ए है माया ...
माया लाउन खोज्या हो कि, मलाई जिस्क्याको
डराउने भए किन जिब्रो पड्काको ?
केटाले जवाफ दिन्छ- स्याट्ट आँखा सन्कायौ, हाँसेँ म त मुसुक्क
अन्तै हेर्‍याै लाजले भयौ तिमी भुतुक्क
इशाराले बोलाको कि मलाई जिस्क्याको
लजाउने भए किन आँखा सन्काको ?
यो गीत संगीतकार राजनराज शिवाकोटीको संयोजनमा चाँडै आउँदै छ । तर, घटनासँग मात्र जोडिएर गीत लेखिनेचाहिँ होइन । 'कहिलेकाहीँ घटनाले पनि गीत जन्माउँछन् भन्न खोजेको मात्र हुँ’, उनले स्पष्ट पारे । गीत भनेको थोरै शब्द र समयबाट पर्याप्त भाव सिर्जना गरी धेरै सन्देश दिन सकिने विधा भएकाले मेरो यसप्रति विशेष झुकाव छ,' उनले थपे 'गीत कसरी लेखिन्छ भन्ने कुनै बनिबनाउँ शुत्र हुँदैन र म त्यसरी लेख्दा पनि लेख्दिनँ । कहिलेकाहीँ लेखौँ-लेखौँ भनेर कस्सिन्छु- गीतै फुर्दैन । कहिले त्यत्तिकै पनि राम्रो गीत सिर्जना हुन्छ ।'
'आखिर व्यक्ति र समाजका प्रवृत्ति, पात्र र घटनालाई बुझाउने क्रममा जे अनुभूत गरिन्छ, त्यसलाई मिलाएर लेख्यो भने गीत बन्दो रहेछ, साहित्य सिर्जना हुँदो रहेछ,' उनी खुलस्त पार्छन् ।
२०४२ सालपछि विभिन्न परिवेश र कालक्रममा लेखेका गीत/कविता/कथा उनीसँग सुरक्षित छन् । तीमध्ये कतिपय सार्वजनिक भइसकेका छन् । ‘उतिबेला लेखेका गीत/कविता/कथाले त्यस कालको परिस्थिति झल्काउने भएकाले म ती सिर्जनालाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गर्ने सोंचमा छु’, उनको योजना बताए । सबै संकलन गरेर पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने उनको तयारी छ । 'जागरण, आधुनिक गीतको संगालो र कविता संग्रह प्रकाशन गर्ने इच्छा छ, हेरौँ कहिले साइत जुर्छ,' उनले भने ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २७, २०७७, ०९:२५:००